Da’ yar iyo Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Da’ yar iyo Iswiidhan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 21 2 2020
Boggagan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan iskoolka, caafimaadka iyo nolosha jaaliyadaha. Waxaa kale oo aad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan xuquuqda la xiriirta xadka da'da kala duwan.
Halkan waxaa ku jirta macluumaad loogu talogalay adigaaga yimi Iswiidhan iyadoo aanay waalid kula socon.
Dhamaan dhalinyaradu waxay xaq u leeyihiin waxbarasho, inay caafimaad haystaan, xilli firaaqo, dhaqan iyo raad ku yeelasho.
Dhalinyarada joogta Iswiidhan badanaaba waa kuwa madax-banaan. Iskoolka waxaad ku baranaysaa inaad u fikirto inaad wax walba dhinac kasta ka eegto. Iskoolka gudaha Iswiidhan waa bilaash. Dhalinyarada ah laga bilaabo 16 sano ee wakhti buuxa wax bartaa waxay xaq u leeyihiin taageerada waxbarashada iyo laga yaabee kaalmada kabitaanka kirada. Tani micnaheedu waa inaad fursado fiican u haysato inaad keli ahaantaa doorato jidkaaga nolosha. Qaar badan waxay qoyskooda ka guuraan wakhti hore, laga yaabee si ay wax uga bartaan magaalo kale.
Adiga waxaa lagaa filayaa inaad tahay qof madax-banaan, laakiin waalidkaaga, wakiilkaaga ama qofka haysta mas'uuliyadaada sharci ayaa mas'uul kaa ah ilaa inta aad buuxinayso 18 sano oo noqonayso qaan gaar. Markaad tahay qof weyn oo dhalinyaro ah waa inaad wax badan is-dabari karto. Adigu waa inaad maareyso dhaqaalahaaga, waxbarashadaada ama shaqo, dhar dhaqid, nadaafada, cunto karinta oo xiriir la lahaato hey'adaha dawladeed. Waxyaabahan waxaad ku sii tababaranaysaa inta lagu jiro wakhtig aaad la nooshahay qoyskaaga, hoy ama hoyga qoyska. Waxyaabaha qaarkood waxaad ku baranaysaa iskoolka qaar kalena adigaa keligaa ogaanaya.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan carruurta xuquuqdooda iyo qaraarka carruurta.
Xadka da'da ee muhiimka ka ah Iswiidhan
Xadyada da'da qaarkood waxay u jiraan si loo ilaaliyo caruurta iyo dhalinyarada, tusaale ahaan in aan la ogolayn in la bilaabo barashada wadida baabuurka ka hor intaanu qofku buuxin 16 sano.
Xadyada da'da ee kale waxay u jiraan in dadka dhalinyarada ag la siiyo xuquuqo, tusaale ahaan in qofku bilaabi karo inuu codeeyo xilliga doorashada marka la buuxiyo 18 sano.
Xiriiryada bogaga kale ee intarnatka
Warbixin ku saabsan caafimaadka, galmada iyo xiriiryada
Xiriiryada macluumaadka ku saabsan in laga guuro guriga
Hey'ada dawladeed ee ururinta deymanka buugooda yar- Ka guurida guriga HSB buugooda yar ee ku saabsan in laga guuro guriga
Bogga intarnatka ee guryaha Guryaha ardayda